Ku rakibida TOMRA 3A waxay ka caawisaa soosaaraha tayada baradhada oo tayo sare leh Kordhinta wax soo saarka & waxtarka - Nidaamka Baradhada
Thanks to isticmaalka warshad kala-soocid heer sare ah TOMRA 3A Shirkadda Duchemin (Caen) waxay ku guuleysataa tayada ugu sareysa alaabteeda.
Duchemin, oo la aasaasay 1984-kii oo ku taal Tourville-sur-Odon waaxda Calvados (14) ee Catherine iyo Christian Duchemin, waxay ku takhasustay baradhada lagu iibiyo astaanta La Ferme Du Val D'Odon. Guillaume Duchemin wuxuu ku soo biiray ganacsiga qoyska 14 sano ka hor maantana wuxuu maamulaa shirkadda. Mudane Duchaman wuxuu la wadaagayaa dareenkiisa isticmaalka sixirka TOMRA 3A, oo ahayd aalad muhiim u ah hagaajinta howlaha wax soo saarka shirkadda labadii sano ee la soo dhaafay.
Waad ku mahadsan tahay tiknoolajiyadda kala duwan ee kacaanka iyo LEDs-ka garaaca, rakibidda TOMRA 3A dhab ahaan waa nooca qalabka ka caawin kara ganacsiyada hamiga leh hagaajinta waxtarka iyo faa'iidada. Duchemin waxay mashiinkeeda ku rakibtay bakhaar baradho ah, halkaas oo cagaf cagafyada laga soo dajiyo baradhada laga keenay beeraha halkaasoo ay ku shaqeyso awood cajaa'ib leh - celcelis ahaan 30 tan saacadiiba. Mashiinka wuxuu ku shaqeynayay karti buuxda sanadkii labaad hada, tanina waa cadeynta ugu fiican ee habka cusub ee taa TOMRA Food, iyo Duchemin, runti way shaqeysaa waxayna siisaa natiijooyin dhab ah.
Iskaashi la jaan qaadaya tikniyoolajiyadda baahida macaamiisha
Kadib labo xilli oo wax soo saar isticmaalidda geedka xarunta kaydinta baradhada, Duchemin waxay ogaatay inay jirto faa iido dheeri ah iskaashiga TOMRA Food.
Duchemin wuxuu ku qanacsan yahay is-hagaajin isdaba joog ah inay fure u tahay guusha. Tani waa mid ka mid ah sababaha loo aasaasay gole tayo leh shan qof shirkadda. Shaqadiisu waxay diiradda saaraysaa yareynta culeyska shaqada, kordhinta wax soo saarka iyo aqoonsashada fursadaha ganacsi ee cusub. Sannadkii 2017, Duchemin waxaa laga codsaday inay noqoto shirkaddii ugu horreysay adduunka ee tijaabisa nooc nooc ah TOMRA 3A, warshad baaritaanka jiil cusub. Jawaab celinta shirkadda ayaa ka caawisay sameynta TOMRA 3A mashiin aad u fiican. Bishii Sebtember 2019, waxay noqotay qayb ka mid ah xalalka kala duwan TOMRA Food.
Guillaume Duchamant wuxuu sharxayaa: “Waan qiimeynaynaa TOMRA Food macaamiishooda diiradda. Uma baahnid in aan badeecada la jaan qaadno mashiinka, taa bedelkeed, mashiinka waxaa loo waafajiyay alaabtayada. Tani waa hab wax dhisid badan!
Grégoire Volpoet, Maamulaha Iibka TOMRA Food Faransiiska gudaheeda, ayaa raacisay: “Tiknoolajiyadeena casriga waxay si buuxda diiradda u saartay qanacsanaanta macaamiisha. Markii aan soo saareynay mashiin cusub, waxaan si dhow u dhageysanay jawaab celinta ay naga heleen macmiil fursad u helay inuu tijaabiyo qeybteena. ”
Shaqada oo yaraatay, waxsoosaarkii oo kordhay
Guillaume Duchaman: "TOMRA 3A waa mashiin aad u kooban oo si fudud loogu rakibi karo khadka wax soo saarka ee kala bixiyaha carrada iyo ka hor marxaladda xirxirida santuuqa. Qalabku waa mid adag oo la isku halleyn karo, adeeg aad u wanaagsan kadib iibka ayaa la siiyaa haddii cillad jirto. ”
Mashiinka TOMRA 3A wuxuu falanqeeyaa digriiga markuu dhacayo wuxuuna saarayaa walxaha shisheeye sida dhagxaanta, burooyinka carrada, qoryaha iyo xididada cilladaysan (cagaaran) maadaama waxsoosaarku udhaxeeyo khadka wax soo saarka. Rakibaadda TOMRA 3A waxaa loogu talagalay inay ku shaqeyso xawaare aad u sareeya iyadoo aan wax dhaawac ah u geysan sheyga laftiisa. Duchemin ahaan, mashiinkani wuxuu xamili karaa ilaa 30 nooc oo baradho ah, yar iyo weynba, dhammaan codsiyada cuntada, sida saxarka adag ee adag, saxarka adag ee casaanka iyo noocyada jiiska baradhada.
Ku rakibida TOMRA 3A waxaa loogu talagalay inay ku shaqeyso xawaare aad u sareeya iyadoo aan wax dhaawac ah u geysan sheyga laftiisa. Duchemin ahaan, mashiinkani wuxuu xamili karaa ilaa 30 nooc oo baradho ah, yar iyo weynba, dhammaan codsiyada cuntada, sida saxarka adag ee adag, saxarka adag ee casaanka iyo noocyada jiiska baradhada.
Guillaume Duchamant wuxuu yiri: “Subaxnimadan waxaan helnay koror aad u badan oo kufsi ah oo ku jira baradho badan oo la keenay, taas oo u baahan in laga saaro, maadaama ay noqon karto isha wasakheynta qaboojiyaha - tani waa khatar weyn mana u oggolaan karno inay taasi dhacdo. Kahor, kahor intaanan rakibin gaariga TOMRA 3A, waa inaan qoondeyn labo shaqaale oo dheeri ah si loo kala saaro. Tan hadda looma baahna maxaa yeelay mashiinku shaqada oo dhan buu qabanayaa. Waxaa intaa dheer, xawaaruhu had iyo jeer waa isku mid. Waagii hore, waxaan ku qaadan karnay saacad iyo badh kala soocista weel noocyada baradhada qaar ka mid ah, halka TOMRA 3A 45 daqiiqo ayaa ku filan. Mashiinka kala sooca ayaa yareyn kara culeyska shaqada. Shirkaddu wali waxay shaqaalaysiisaa afar qof oo ka shaqeeya kala soocayaasha, laakiin culeyska shaqadu wuu yaraaday, taas oo macnaheedu yahay inay si fiican awood ugu yeelan karaan shaqada.
Dayactirka kahortaga ah
Guillaume Duchaman: "TOMRA 3A waa mashiin aad u kooban oo si fudud loogu rakibi karo khadka wax soo saarka, barta kala bixiyaha carrada iyo ka hor marxaladda xirxirida santuuqa. Qalabku waa mid adag oo la isku halleyn karo, adeeg aad u wanaagsan oo iibka kadib ayaa la siiyaa haddii cillad jirto. Tani waa mid muhiim ah: marka mashiinka la joojiyo hal saac, 25 qof ayaa istaagi doona iyagoo sugaya in mashiinku dib u bilaabmo, laakiin adeegga iibka kadib ee shirkadda TOMRA Food si dhakhso leh ayuu uga jawaabaa codsiyada wuxuuna xaliyaa dhibaatooyinka. Waan daganahay, maxaa yeelay TOMRA si joogto ah oo horay loo soo jeediyo in loo cusbooneysiiyo qandaraaska dayactirka kahortaga. Maadaama qalabka farsamada ay muhiimad weyn leeyihiin, waa in si nidaamsan loo ilaaliyaa. "
Tirakoob sax ah oo waxtar leh
TOMRA 3A waxay ka caawisaa Duchemin inay ilaaliso diiwaanka maaddada saxda ah. Lagu wado barnaamijka softiweerka TOMRA ACT, mashiinkan kala soocida wuxuu ururiyaa tirakoob aad u sax ah oo ku saabsan howlaha la dhammeeyay, oo lagu muujiyey sawirada si firfircoon loogu soo bandhigo shaashadda taabashada waqtiga dhabta ah. Mustaqbalka, qalabkani wuxuu u oggolaan doonaa soo saarayaasha iyo, haddii loo baahdo, macaamiishooda inay helaan xog la xiriirta marxaladihii hore ee silsiladda teknolojiyadda.
Guillaume Duchaman wuxuu sharxayaa: “Waxaan ka baaraandegnaa baradhada ka soo baxda beeraheenna ama beeraha kuwa aan shuraakada la nahay. Waxaan heli karaa qaybo badan oo badeecado ah oo ka kooban shan qaybood oo cabbir ah. Hal darajo gudahood, waxaa jiri kara ilaa toddobo qaybood oo cabbir ah, waxayna kuxirantahay qiimaha iibka iyo iibka labadaba. Waxaan u baahanahay inaan awood u yeesho inaan u muujiyo tan wada-hawlgalayaasha wax-soo-saarka. Alaab-qeybiyeyaasheyda waxay helaan warbixinno sax ah si loo hubiyo xiriirro waara oo lagu kalsoonaan karo. Waxaan la shaqeyneynaa 24 soo saareyaal kuwaas oo daacadnimo noo sii ahaanayay sannado badan, tanina nasiib uun maahan! Geesta kale silsiladda qiimaha, waa inaan hubinnaa in macaamiisheenna - tafaariiqlayaal waaweyn - la kulmay. Xarunteena ayaa sameeya 12 xisaab-celin sanadkiiba maamulayaashayada tayada macaamiisha iyo ururada dibada. TOMRA 3A waxay kuu ogolaaneysaa inaad la qabsato shuruudahan ganacsi. "
Duchemin: tirooyin iyo xaqiiqooyin qaar
Intii lagu guda jiray xilli 2019, baradho waxaa lagu beeray 550 hektar, halkaas oo laga soo goostay 18 tan oo dalagyo ah. Shirkaddu waxay isticmaashaa hababka beerashada dabiiciga, dhaqanka iyo beero-beelka. Shirkaddu waxay shaqaaleysiisaa 000 shaqaale waqti-buuxa ah, iyada oo 60 shaqaale dheeri ah ay shaqaaleynayaan inta lagu jiro xilliga goosashada ugu sarreysa. Muddadan, xarunta kaydinta baradhada waxay furan tahay 40 illaa 14 saacadood maalintii. Shirkaddu waxay maareysaa 16 nooc iyo shan qaybood oo cabbir ah waxayna ku shaqeysaa raxan ka kooban 30 gaari (kuwa xamuulka qaada iyo cagaf-cagafyo) oo isku dar ah 14 km inta lagu guda jiro goynta.
Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeri ah bogga: www.lafermeduvaldodon.com.
Tags: TOMRA Foodmakiinadaha kala sooca
TOMRA Food wuxuu soo bandhigayaa mashiin cusub oo kala sooca baradhada
Soo-saareyaasha Baradhada Baakadeysan iyo COVID-19 Caqabadaha: Mudnaanta Tayada iyo Raadinta
Beeraleyda baradhada oo xirxiran: diirada saar isku-darka tayada iyo dabacsanaanta teknolojiyada
Hambalyo Maalinta Shaqaalaha Beeraha!